Reflections: नारी दिवस अनि मेरो आफ्नै गन्थनहरू ..
Ardnez March 09, 2012 5:59 PM
Anonymous March 09, 2012 6:04 PM
मन भरि कुराहरु मेरा पनि छन्‌ तर लेख्न तपाईको जस्तो कलममा तागत छैन तर मेरा धेरै कुरा तपाईको लेखमा समेटिएका छन्‌ त्यो पो खुशीको कुरा हो!
सबै जना फलाक्न जान्छन्‌ जब गर्नु पर्ने बेला आउँछ त चोर लुकेझैँ हु्न्छन,थाहा हुनु र रुपान्तरण हुनु नितान्त फरक कुरा हो। हामीभित्र रुपान्तरणमा जाने चेतनै छैन, जव सम्म आफै रुपान्तरण हुने प्रकृया थाहा पाउँदैनौ सबैकुरा बेकार हुन। हाम्रो समाजमा "रुपान्तरण" हुने पकृयाबारे बोध हुनु आवश्यक छ, अब बोध बारे के लेख्नु र? यो त आफैले गर्नु पर्ने साधना हो...आध्यात्मिक साधना..
Sudeep bartaula March 11, 2012 6:34 AM
धेरै खुशी लाग्यो यहाँको प्रतिक्रिया पढ्न पाउंदा । राष्ट्र हाम्रो,समाज हाम्रो; त्यसो हुनाले सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गरे पक्कै तपाईंले भन्नु भए जस्तो 'रुपान्तरण'को प्रकियामा पनि समाज ब्रिहत रुपमा अघि बढ्ला । तपाईंजस्तो पाठक भेट्नु मेरो लागि खुशीको कुरा हो ! मेरो कलममा तागत तपाईंको प्रतिक्रियाले भरिदिएको छ ।